Araka ny fantatra, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia sarotra ho an'ny zatovovavy ny manamarika ny daty marina amin'ny fiterahana. Izany no mahatonga ny fikarakarana ara-pahasalamana, amin'ny fametrahana ny fe-potoam-pananahana amin'ny vohoka, mifototra amin'ny datin'ny fanombohana ny fitondrana vohoka farany sy teo aloha. Amin'io kaonty io, ny fehezan-dalàna antsoina hoe "fitsaboana" dia miorina, izay somary lehibe kokoa ary tsy mitovy amin'ny tena izy.
Ahoana ny fizotrin'ny fitondrana vohoka?
Vehivavy maro be no bevohoka voalohany dia tsy mahafantatra hoe inona no dikan'ny vehivavy bevohoka sy ny fomba hamaritana azy. Amin'ny fotoana mahazatra mandritra ny vanim-potoanan'ny ratra (28 andro), dia mety haharitra 14 andro ny fahatanorana. Noho ny hoe ny daty nanoratana ny fotoana farany dia ampiasaina amin'ny famaritana, matetika dia tsy mifanohitra ny fepetra nateraky ny fiterahana sy ny embryonic (tena). Ny mandalo eo anelanelan'izy ireo dia 2 herinandro, ary indraindray 3.
Ahoana ny fomba hanisana ny maha-bevohoka azy (tena)?
Ho an'ny vehivavy bevohoka hanombantombanana ny fotoana maharitra amin'ny maha-bevohoka, ilaina ny mahafantatra tsara ny datin'ny fahatsiarovana. Raha tsy afaka mametraka azy ianao, dia afaka manavotra ireo fitsapam-pahaizana maoderina azo ampiasaina amin'izao fotoana izao. Eo afovoan'ny famolavolana fitaovana toy izany dia fitaovana elektronika, izay ahafahanao mamaritra mazava tsara ny faharetan'ny vohoka. Ny fahadisoana dia kely.
Mora kokoa ny zavatra iray raha mahatsiaro tsara ny datin'ny fiafaran'ny fitondran-tena farany ny vehivavy iray. Amin'ity tranga ity, ilaina ny manombatombana hoe firy andro maromaro no lasa hatramin'io fotoana io. Ny isa herinandro naharitraritra dia ny tena vanim-potoanan'ny bevohoka.
Ara-dalàna raha manatsara ny faharetan'ny vohoka ianao?
Araka ny antontan'isa momba ny statistika, ny fahasamihafana eo amin'ny fepetra tena izy sy ny fiterahana ao anatin'ny 2 herinandro, dia tsy hita afa-tsy amin'ny 20% amin'ny vehivavy bevohoka. Ny 20% hafa amin'ny elanelana misy eo amin'ireo teny roa ireo dia latsaky ny 14 andro. Ny ankamaroany, 45%, - ny fahasamihafana eo amin'ny teny roa dia miovaova amin'ny faran'ny herinandro 2-3 herinandro, ary ny 15% amin'ny vehivavy bevohoka dia mihoatra ny 3 herinandro.
Raha toa ka tsy mitovy amin'ny 28 andro ny fe-potoana mandritra ny vanim-potoanan'ny ratra, dia tsy misy ny fampangatsiahana amin'ny andro 14, fa vao haingana na aoriana. Noho izany, ny vanim-potoanan'ny embryonon dia ho samy hafa amin'ny izay hiorenan'ny mpitsabo mpanampy.
Ohatra, raha maharitra 35 andro ny faharetan'ny vehivavy iray, ny 21 taona monja dia mety hitranga ihany no hitrangan'ny toe-draharaha, ary tsy toy ny mahazatra, noho ny 14. Noho izany, ny fe-potoana fitsaboana embryonika mandritra ny herinandro ho amin'ny herinandro dia 5 herinandro. Amin'izany fotoana izany, raha manisa ny taova farany ianao, dia ho 6 herinandro izany.
Inona no azoko atao raha tsy afaka mamaritra ny fe-potoana aho?
Ao amin'ny dingana voalohan'ny fitondrana vohoka dia azo atao ny mamaritra ny vanim-potoana vanim-potoana raha tsy amin'ny famakafakana ny hCG ihany . Miaraka amin'ny fanampiany, dia voafaritra ny vanim-potoanan'ny foetus. Amin'ity tranga ity, ny fanitsiana dia atao amin'ny daty nanaovana ny fiheverana azy. Azonao atao tsara ny mametraka ny endriky ny ultrasound. Amin'ny fanatanterahana io fandinihana io, dia raisina an-tsakany ny endriky ny ampahany tsirairay amin'ny vatan'ny fozalaka, araka izay hamaritana ny taonan'ny foetus. Araka ny vokatry ny fampiroboroboana ultrasound dia mety hiorina amin'ny maha-bevohoka azy, and embryonic.
Rehefa mamaritra ny faharetan'ny fitondrana vohoka, dia azonao atao ihany koa ny manaiky ny faharetan'ny vanim-potoana. Na izany na tsy izany, miaraka amin'ny vanim-potoan-taonan'ny reny mandritra ny fe-potoana, ny fiheverana dia mety hitranga aoriana kely, noho izany dia hitranga any aoriana ny fahaterahana.
Noho izany, ny fahafantarana ny fahasamihafan'ny fahasamihafana sy ny fiterahana, ny vehivavy dia hizara ireo hevitra roa ireo, ary tsy gaga fa ny fotoana omen'ilay dokotera-gynecologista dia lava kokoa noho izay nokendreniny, izay isaina araka ny datin'ny fahatsiarovana.
Ny herinandro faha-39 momba ny fitondrana vohoka - fanoherana mahery
Tetezana tokana miaraka amin'ny tadim-poitra
Pantsy ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny tanany manokana
Zavatra ho an'ny vehivavy bevohoka
Sex in the pregnancy early
Tandroka fialokalofana nandritra ny fitondrana vohoka
Polycystose sy ny bevohoka
Vavaka vehivavy bevohoka
Amin'ny firy no bevohoka amin'ny ultrasound?
14 herinandro ny fitondrana vohoka - ahoana no ahafahan'ny foetus mivelatra, ary inona no tsapan'ny mama?
Pomponina eo amin'ny masony, volo eo amin'ny hoho ary 34 kanto be marenina-trend Instagram!
Inona no hitan'ny alika?
Toe-tsaina ara-pihetseham-pon'ny olona
Fomba ahoana no hifidianana kisoa?
Mangatsiaka amin'ny alika
Sakafo manitra ho an'ny pies
Tahotra ny fiterahana
Karoka juice - tsara sy ratsy
Tantara 15 momba ny fomba fiatrehan'ny papa Swedish
Dresses amin'ny fomba Okrainiana
Zava-mahazatra - fahavaratra 2015
Firy karazana inona no ao anatin'io fety io?
Tukums - toetoetran'ny mpizahatany
Famaranana andro amin'ny pastèque
Kitapo ao amin'ny tranon'ny firenena iray - hevitra tsara indrindra ho an'ny famolavolana
Famaritana ny propolis amin'ny rano manjono avy amin'ny diabeta